Lapho udinga lokugoma ngokumelene namarabi? Izimpawu, contraindications futhi side effects
Pet amaRabi kuyadingeka ngonyaka. kulokhu kuphela singalindela ukuthi isilwane akusho malimbambe yena futhi ngeke engozini abantu eseduze. Phela, isifo akunakuphulukiswa, uma amarabi athuthukile - futhi inja noma umuntu akanakho ukusiza. Njengoba abantu, nokugcinwa yonyaka zokuvimbela ke akudingekile, umgomo isetshenziswa kuphela njengesinyathelo eziphuthumayo uma yenhlwathi isilwane esolwa ukuthi wukuthi kungcono esithathelwanayo.
Lesi sifo ezibangelwa ama-virus uhlobo umndeni Lyssavirus Rhabdovirida. It idluliselwe kakhulu izilwane zasendle, ikakhulukazi amalulwane. Lwegciwane ingena egazini kanye naphakathi ngamathe futhi sithinta njengoba amangqamuzana ezinzwa e emgogodleni ingqondo. Umphumela uba encephalitis acute, okwaholela ekufeni ngeviki - nengxenye ukusuka ekuthomeni lesi sifo. Imbangela yokufa - ukuboshwa zokuphefumula. Isikhathi bayashintshana ekufukameleni kungaba emifushane (izinsuku ezingu-10) futhi eside (amasonto 7).
Namuhla, lokugoma ngokumelene namarabi isilinganiso langempela, futhi abanikazi kakhulu isilwane njalo goma kubo ngokumelene igciwane, ngakho angumtfombo ukutheleleka uhlala zasendle, izinja elahlekile. Emazweni asathuthuka, nokuqubuka zenzeka kanengi ukudlula e-ophucuzekile. Ukugonywa zabantu kuyatholakala izibalo, abantu abangaba yizigidi ezingu 10-12. Minyaka yonke, abantu abangaba ngu-35,000 ubulawe ngamarabi. Ngokuvamile kuba izingane.
lokugoma Amarabi yasungulwa ososayensi kusukela waseFrance okuthiwa u-uLouis Pasteur engaphezu kwekhulu edlule - ku-1885 - ngesisekelo igciwane attenuated. In the 80s kwekhulu elidlule, abacwaningi baye wadala wokugoma entsha inactivated, iyashelela futhi ephephile. Ngemva isingeniso nesineke yayo kwakhiwa amasosha omzimba esitebeleni is, futhi uma igciwane ucala kutfutfukisa, abelwe ngokushesha amasosha omzimba okunqanda, futhi izifo.
Lapho lokugoma ngokumelene namarabi
Njengendlela zokuvimbela zamarabi wokugoma esetshenziswa abantu abahlala ezindaweni lapho kukhona umqedazwe lesi sifo, kanye ngokushesha ngemva yisilwane esinalo engaziwa. Uma isilwane waziwa ke ukuthola uma isheshe, uma kungekhona - ukwenza ukuhlaziywa igciwane egazini. isilwane Aggressive is euthanized futhi ihlolwe ubuchopho izidakamizwa - azihlole kuyinto athembeke.
Kungakhathaliseki ukwenza lokugoma ngokumelene namarabi umuntu abalunywe isilwane sakhe siqu?
Uma inja noma ikati isheshe, wayithukuthelisa kuhlasela ngumnikazi ke ematfuba zamarabi cishe nhlobo. Uma okwashiwo izilwane ezinsukwini ezimbalwa ezizayo akalushongo iyiphi babhekwa ekuziphatheni ke kukhona isizathu sokwesaba.
Uma umngane abane-ezinemilenze akusilo isheshe, futhi ngaphandle wayala wonke amathuba ukubamba ezilwaneni zasendle, nokuvimbela isidingo sabantu.
Izimo umgomo amarabi
- isimo ukuntula mzimba;
- khona izimila;
- Izinkinga phakathi imigomo odlule
Njenganoma yimuphi ukwelashwa, lokugoma ngokumelene namarabi has imiphumela engemihle:
- izimpawu zendawo emva umjovo: ubuhlungu, ukuvuvukala, ububomvu (kufika ku-74% Goma)
- ikhanda kanye muscle ubuhlungu, isicanucanu, ukungakhululeki besisu, isiyezi (40% graftable)
Ngaphansi ezivamile lezo zinkinga ezilandelayo:
- ubuhlungu bamalunga, ukuqubuka, kanye nemfiva (6%);
- paresis evilaphayo, iziyaluyalu autonomic, ukuphazamiseka sezinzwa (Barre syndrome). Kukhona ezingavamile kakhulu futhi sihamba ngokuphelele ngokusebenzisa izinyanga 3.
Izingxenye zomuthi kungaba baxabane nomzimba kobukhulu obuhlukahlukene. Ngokwesibonelo, izingane abasabela iguliswa amaqanda amaprotheni, akunakwenzeka ukwethula igciwane wakhulela ku inkukhu imibungu. Nge sequelae yokugoma kuyadingeka ukurekhoda ngokunembile usuku, isikhathi kanye izimo yomsuka wawo futhi sisebenzise lolu lwazi kudokotela.
Hernia enkabeni ezinsaneni: noma ukuba ngokuthi?
Abdominoplasty (Tummy abese eyishutheka): izimpawu, contraindications, incazelo inqubo, amazwana
Yamaphaphu Vienna. Ezingasadingeki emithanjeni yamaphaphu
Uvula Eshiswa: ukwelashwa
Amasosha Omzimba yokulwa nesimungumungwane
Urinalysis. Indlela ukuqoqa futhi ahumushe imiphumela?
Ikhanda nge "bagel" - ngokushesha futhi kumane!
"Sokos Hotel Vasilievsky" Saint-Petersburg: izithombe kanye nokubuyekeza
Intuition - ukuthi umbono kwangaphakathi
Gastroesophageal Reflux isifo
Uphawu hyperkalemia futhi prophylaxis izifo
Definition okungaguquki engayi isiRashiya
Kuhle tattoo amakhosi eMoscow: yokulinganisela, nokucwala inhlokodolobha
Ngefu i-Oort futhi Kuiper ibhande - umngcele isimiso sonozungezilanga umzimba
Anne Margrethe: i-biography emfushane
Amaphilisi inhliziyo. Ukuze ukhethe futhi uthenge!
Lamanzi esiphethu nge pancreatitis: yini ukuphuza?